London - Vaovao momba ny dia | Vaovao momba ny dia (Pejy 2)
Katedraly St Paul, Londres
Feno fiangonana i Eoropa ary tsy maningana amin'izany i Angletera. Ohatra, any Londres dia azonao atao ny mahita ny katedraly tsara St. Paul, tempoly anglikana. Ho any Londres ve ianao? Aza adino ny mitsidika ny Katedraly San Pablo sy ny zava-tsarobidiny: ny galeria, ny dome, ny crypt, ny amboarampeo, ny trano fiangonana. Izay tokoa!
Fanovana ny mpiambina any London
Lazainay aminao ny pitsopitsony rehetra mba hankafizanao ny fiovan'ny seho mpiambina ao amin'ny Buckingham Palace ao an-tanànan'i Londres.
Jereo ny tanànan'i Londres afaka 4 andro
Ny fahitana ny tanànan'i Londres ao anatin'ny 4 andro dia azo atao, raha manondro ireo toerana mahaliana indrindra ao an-tanàna isika, satria tanàna feno toerana hita izy io.
London miaraka amin'i Jack the Ripper sy Sherlock Holmes
Jereo London miaraka amin'ny diany amin'ny Jack the Ripper sy Sherlock Holmes. Fahafatesana, niharam-boina, mpamono olona, ​​fahavalo, manitikitika ny saina manerana ny làlambe taloha an'ny renivohitra anglisy.
Toerana any Londres izay angamba tsy fantatrao
Jereo ireo toerana tsy dia fantatra ao an-tanànan'i Londres ireo, fitsidihana izay mihoatra ny tolo-kevitry ny mpizahatany.
Mandany Krismasy any London, drafitra inona izany!
Noely any London? Tsara ny hevitra: tsena, kodiarana ferris manazava, varavarankely fivarotana voaravaka, hazo goavambe, amboarampeo, fanahy Krismasy marobe.
London amin'ny mpivady
Handeha hiaraka amin'ny sipanao na olon-tianao ho any Londres ve ianao? Soraty avy eo ireo toerana sy traikefa hahafinaritra anao mivady ary, ho ela velona ny fitiavana!
Fialantsasatra amin'ny fahavaratra 5 avy any Londres
Handeha any Londres ve ianao amin'ity fahavaratra ity? Raha te hankafy azy ianao dia afaka mandositra ny tanàna mankany Brighton, Portmouth, Salisbury, Whitstable ...
Tanàna eropeana 5 be mpitsidika indrindra
Lazainay aminao hoe iza avy ireo tanàna eropeana 5 be mpitsidika indrindra tamin'ny 2016. Misy Espaniola iray amin'izy ireo, azonao an-tsaina ve ny iray?
Torohevitra momba ny dia lavitra mankany London
Manolotra anao toro-hevitra maro izahay handehanana any London mora foana. Ataovy ao an-tsaina izy ireo ary afaka mankafy ny tanàna ianao nefa tsy mila mamoaka ny poketranao;).
Ny London Underground dia efa mandeha amin'ny alina
Notokanana ny serivisy alina London Underground! Ny Tube amin'ny alina.
Trano fisotroana telo hafahafa sy manan-tantara indrindra any Londres
Raha mitsidika an'i Londres ianao ary tianao ny bara, aza hadino ny mitsidika ireo trano fisotroana anglisy telo ireo izay anisan'ny tsy dia fahita sy manan-tantara indrindra eto an-tanàna.
Tsena parasy tsara indrindra any London
Akanjo sy kojakoja vita amin'ny lamaody? Firaketana taloha sy fahagola? Sakafo sy fialamboly? Tadiavo izany rehetra izany ary bebe kokoa amin'ny tsena parasy tsara indrindra any London.
Tranombakoka efatra maimaim-poana any London
Raha tsy manam-bola ianao, tsidiho ireo tranombakoka maimaim-poana any Londres
Inona no ho hitanao maimaimpoana any London
Jereo hoe inona no ho hitanao eto London maimaimpoana amin'ny fisafidianana zavatra lehibe 7 hatao amin'ny mora vidy, manome anao fidirana amin'ny tranombakoka sy manintona hafa
Tranomaizina any London: Fampihorohoroana any Londres
Lazainay aminao ny toetran'ny Dungeon London, tranombakoka mampihoron-koditra manolotra seho sy seho izay hamela anao hangovitra. Te hahita izany ve ianao?
London dia manana maritrano maoderina koa
Tianao ve ny maritrano maoderina? Mampiseho aminao ny sangan'asa maritrano farany indrindra eto London izay tsy azonao adino raha handeha hamonjy any ianao.
Tsidiho i Londres amin'ny faran'ny herinandro
Ny fitsidihana ny tanànan'i Londres amin'ny faran'ny herinandro dia midika hoe mahita ireo toerana lehibe sy manintona, koa mariho izy rehetra sy ny tsena.
Halloween 2013: Fivarotana akanjo telo voalohany any London
London dia manana fivarotana sasany tsara indrindra eto amin'izao tontolo izao mividy akanjo ho an'ny Halloween.
Biraon'ny fizahantany any Londres
Tao London Logue dia namoaka lisitra iray niaraka tamin'ireo biraon'ny fizahantany izay hitanao ao Londres. Tonga soa izany ...
Sarintany misy ny toerana misy ny olona malaza any London
Amin'ny alàlan'ny BajoCoste.com mahazo vaovao mahaliana aho: misy sarintany namidy tamin'ny eBay izay…
iAudioGuide dia manome torolàlana audio maimaimpoana amin'ireo tanàn-dehibe eropeana
Leo ny mitondra ny mpitari-dalana anao am-perinasa foana? Miaraka amin'ny iAudioguide dia azonao atao ny mihaino ny torolàlana audio anao rehefa mihetsika ianao ...